Yakazara Warhammer II: Kunyarara uye Hasha kuri kuuya munguva pfupi (DLC) | Linux Vakapindwa muropa
Yakazara Hondo: WARHAMMER II: Runyararo & Hasha Izvo hazvidi mharidzo dzakawandisa, zvisinei, kune avo vasingazive nezvazvo, iwe unotoziva kuti iri zano revhidhiyo mutambo wakagadzirwa neCreative Assembly, SEGA uye inotakurirwa naFeral Interactive kumhanya paGNU / Linux distros.
Iye zvino zita iri richarongwa se ichangoburwa DLC, ndiko kuti, zvinyorwa zvinoregererwa kutambanudza kumusoro mukuru. Kana iri zuva rekuburitswa, rakaziviswa nguva pfupi yadarika uye rakagadzirirwa Nyamavhuvhu 14 pakarenda. Nekudaro, Feral Inopindirana yakambotaura kuti yaizosvika yeLinux uye macOS nguva pfupi yapfuura kuvhurwa kweWindows.
Iyi Yakazara Warhammer II: Iyo Silence & Iyo Hasha DLC iri kuumba kumusoro kuti ive hombe hombe paki, iine huwandu hwenhau. Ehezve, iyo yekuvandudza ichave yemahara kana iwe uchitova uine iyo yekutanga zita. Iwe unozongoda kurodha pasi iyo DLC zvemukati kubva muchitoro chiutsi kana kubva kuHumble Store uye unakirwe nemaawa emutambo mutsva.
Pakati pevamwe ve nhau yakapihwa naTotal Warhammer II: Iyo Silence & Iyo Hasha ndeiyi:
Madzishe maviri akasarudzika anotungamira avo mapato:
Oxyotl, muvhimi asingaoneki, weLizardmen.
Taurox iyo Brass Bull inotungamira maBeastmen.
Rondedzero yakasarudzika yemushandirapamwe yemapoka ese ari maviri, iine maakanika akakosha pamepu yekuratidzira
Masimba matsva ane simba uye magamba emaLizardmen neBeastmen, anosanganisira:
Iwo ane simba Jabberslythe uye zvimwe zvikara zveava zvikara.
Dzinobhururuka nyoka, mapofu emhuka uye matsva skinks kune madzvinyu.
Pamusoro pezvo pachave nekumwe kuvandudzwa mumusoro, senge kuvandudzwa kwemadzviti, kugona kutsva, ogres, kudzokororwa kwemamwe mabasa senge mibairo, mepu dzenhimbe,
Rangarira kunyoresa mukati Yese Hondo Kuwana kukwanisa kunakidzwa neiyi yemahara DLC. Kune izvi iwe unofanirwa kuenda kunedandemutande iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yakazara Warhammer II: Kunyarara uye Hasha Kuuya Pfupi (DLC)